Qalabka warbaahinta waxey billaabeen Iney Hadalladii Ayaan u isticmaalaan seef
Qalabka warbaahinta ee dalkaan waxey billaabeen Iney Hadalladii Ayaan diinta ay ku dhaleeceyneysey ay usii isticmaalaan sida agab dagaal oo kale sida seefta mindida ama qoriga.
Sida aan filayo iney dadbadan ka dheregsanyihiin waxaa qalabka warbaahinta ee dalkaan holland waayadaan dambe si weyn loogu hadal hayaa qof dumar ah oo markeedii hore Somaaliya ka timid laakiin waqtigaan xaadirka ah aad u doorsoontey wax lagu tilmaami karona aysan cidina sheegi karin, waxaan ula jeedaa qofka markeedii hore Ayaan Xersi lagu magacaabi jirey. .[qoraalka oo dhan]
Qofkaani maadaama ay tahay qof loollanka siyaasadeed ee dalkaan Holland ka qaybgashey ,waxey dooratey habka ugu raqiisan uguna sahlan ee waddamadaan reergalbeedka siyaasad ahaan horumar deg-deg ah loogu gaari karo taasoo ah iney naceybka dadyowgaan qaarkood ay dadka muslimiinta ah u hayaan hormuud u noqoto.
Wixii ay hadda ka hor diinta islaamka sheegtey waxey noqonayaan wax aan macno laheyn iyo iqarso marka loo eego hadalkii ugu dambeeyey ee dhawaan 25-01-2002 ka soo yeerey. Laakiin akhriste inta aanan hadalladeeda idiin soo gudbin ka hor waxaan jecleystey inaan idiinkaga sii afeefto ama idiinkaga digo meelka dhaca hadalladeeda, fogaantooda iyo culeyska ay leeyihiin haddaba akhriste is deji qoraalka soo socda yuusan niyaddaada iyo imaankaaga suuban wax rinjikac ah ku reebin.
Sida ku qoran wargeysyada dhmmaantood wada muhiimka ah ee aan cinwaankooda xagga hoose idiinkugu soo gudbindoono, qofkaan markeedii hore Ayaan la oran jirey waxey fadeexad weyn dusha ka saartey Nabigeennii weynaa NNK ha ahaatee. Waxey ku tilmaantey inuu ahaa kaligii taliye ma naxe ah iyo midda ka sii daran inuu ilmo yar oo sagaal jir ah oo nin saaxiibkiis ah dhaley "Caa’isha" jeclaadey.
Ayaan Iyadoo dooneysa iney inta dhagaxa tuurto dabadeedna gacantii ay dhagaxa ku tuurtey qariso ayey hadalkeedii sii wadatey oo tiri: dhaqankeenna reer galbeedka qofkaas oo kale waxaa lagu tilmaami karaa "paedophile" eraygaan ninkii aan garaneynin reergalbeedku waxey ku tilmaamaan qofkii caruurta wax ka daya.
Waxay kaloo sheegtey inuusan nabigu waxba ka duwaneyn kaligood taliyeyaasha maanta ay reergalbeedku necebyihiin sida Saddaam Xusein iyo Bin laaden. Waxaa kale oo ay ku sii dartey iney wali naceyb weyn u heyso waalidiinteed oo quraanka barashadiisa ku qasbijirey awgeed iyo macallinmkeedii quraanka oo sida ay sheegtey isna quraanka barashadiisa ku dili jirey.
Sida aan anigu culimo badan ka maqley nabigeennu markii uu Caa’isha guursadey kadib waxaa gurigeynteeda lala sugey illaa iyo inta ay ka qaangaareyso dabadeedna sida aan wada ogsoon nahay waxey qoyska nabiga ku yeelatey qiimeyn iyo muhiimad aad u weyn.
Haddaba markaan u noqdo faallada cinwaanka ee aan maqaalkeyga xagga sare ku xusey qalabka warbaahinta ee waddankaan talefishin iyo radiyo aad daarto oo maalmahaan aan inta badan qofkaan iyo hadalladeeda lagu heyn ma’arkeysid waxaad arkeysaa maamulayaasha qalabka warbaahinta oo iyagu markoodii horeba aan diinta islaamka iyo intii ku abtirsataba aad u jecleyn iyagoo agab dagaal ka dhiganaya hadalladeeda weerar xoog leh oo dhan walba ah iyo dicaayad ka dhan ah muslimiinta si toos ah iyo si aan toos aheyn ay u billaabeen, intabadan waxaad arkeysaa ama maqleysaa iyagoo wariyeyaashu ay u jiibinayaan wareysiyo ay ka qaadeen dad ay soo xusheen oo inta badan qofkaan hadaladeeda wax garowshiyo ah u muujinaya.
Dhanka kale waxaa arrintaan si weyn uga gilgishey urrurada dadka muslimiinta ah ee dalkaan ku nool kuwaasoo u badan dad Turki iyo marokko ka yimid, qaarkood waxey arrinteeda hordhigeen maxkamadaha waddanka qaarna waxey ku tilmaameen qofkaan ineysan aheyn qof maskaxdeedu dhan tahay waxey sheegeen in wax u dhimmanyihiin sidaas darteedna aan hadalladeeda waxba laga soo qaadin.
Intaas oo xumaan, aflagaaddo iyo meel kadhac ah oo Ayaan ay u geysatey diinteeda, aslakeeda iyo dhammaan dadkeeda waxey ku gaartey iney ku guuleysato kursi ay ka heshey baarlammaanka waddanka Holland kaasoo doorashadii ugu dambeysey ay uga qaybgashey magaca xisbiga siyaasad ahaan aad u xag jira ee midigta ah VVD , ayaan aad ayaa maanta loo waardiyeeyaa iyadoo laga ilaalinayo dad aan la garaneyn meel ay ka imaan doonaan, markaan ka arko Talefishinka ayadoo dad badan oo waardiyeynayaa ay daba socdaan ayaa waxaa maskaxdeyda ku soo maaxata xasuusta waayadaan Somaaliya joogtada u noqotey ee ku saabsan Dagaal oogayaasha Somaaliyeed oo dhibaatada iyo bililiqada ay dadkooda ku hayaan awgeed maqaan dhalanteed ah ku gaarey iyagoo intii iney Somaaliya horumar gaarto aan dooneyn kaalmo ka helaya bal fiiri akhriste sida qoftaan oo kale ayaa ayagan dadkooda ay dhibaatada u geysteen aad looga waardiyeyaa waxaan filayaa in waxa ay ku kala duwan yihiin ayada iyo dagaaloogayaasha Soomaliyeed aysan haba yaraatee jirin, haddii aan labadooda is bar-bardhigno meesha ay dagaal oogayaashu dhulkooda sida ba’an u bililiqetsteen ummaddooda ay ajanabi dano kale wata gacanta ugu galiyeen ayey waxey iyaduna sidoo kale bililiqadaas iyo mid ka daran ku haysaa diinteeda, iyaga waxaa dadkooda ka waardiyeeya mooryaan ay Itoobiyaanku maalgaliyaan waxeyna sameysteen Garoomo diyaaradeed iyo dekedo gaarahaaneed halka ay iyada fadhido baarlamaanka waddankaan ,askar reergalbeed dharcad ahna ka waardiyeyaan iyo waliba sida aan anigu tuhunsanahy ay daba ka riixayaan xogag kale oo qarsoon.
Haddaba war iyo dhammaantiis talada ugu habboon oo anigu garashadeyda yar aan dadka walaalheyga Soomaaliyeed jeclaanlahaa iney ila qeybsadaan waxey tahay inaan haba yaraatee qofkaan iyo hadalladeeda wax muhiimad ah la siinnin isla markaana aan loo dhaaran loona hanjabin(sida ay iyadu dhowr jeer ku andacootey) ee sida ay mudan tahay loola dhaqmo taasoo ah in laga soo qaado qof aan macno laheyn laakiin haddii loo hanjabo waa sidii ay rabtey ma xasuusataan ninkii la oran jirey Salman Rashdi oo buug aan runahaantii qiimo laheyn oo xitaa aan si wanaagsan loo qorin ee "Aayadihii sheyddaanka" diinta islaamka ka qorey markii loo dhaartey kadibna taajirey magacna yeeshey haddaba taasi waa inta ay qoftaani raadineyso ee yaan lagu saacidin iney danaheeda gurracan gaarto, yaan loo dhaarannin loona hanjebin dadka hadda xambaarsan ee dusha ku wataa markii ay ka dhemeystaan qofkii nool wuu arki doonaa ayagoo iska soo tuurey waxaa kaliya oo loo baahan yahay waa in aan la illoobin ee la xasuusnaado maalin ayaa lala xisaabtamidoonaa maalin ay noqotaba adduunka ama aakhiro.
Intaas iyo Nabadgalyo.
Ilaha kale duwan een maqaalkeyga aan ka soo kala xigtey waxey kala yihiin: www.trouw.nl www.volkskrant.nl www.nrc.nl iyo kuwo kale oo badan. waxaad ka raadinkartaa magaca Ayaan marka aad wargeysyadaan boggooda Internetka tagto.